1. မွနျမာဇာတျသဘငျစာအုပျ ဝဖေနျခကျြ - ဒေါကျတာသနျးထှနျး
မွနျမာပွဇာတျတို့ကို လလေ့ာသုံးသပျ၍ မောငျထငျအောငျ အင်ျဂလိပျဘာသာဖွငျ့ ရေးသညျ့ မွနျမာဇာတျသဘငျ စာအုပျအား ဂအြေစေတီဝပျ ဝဖေနျခကျြ (လနျဒနျတက်ကသိုလျ အရှတေို့ငျးပညာ သိသငျစာစောငျ၊ အတှဲ ၉၊ ၁၉၃၇၊ ၁၉၃၇-၁၉၃၉၊ ၇၉၂- ၇၉၃)ကို ...
... ခိုက်ရန်။ သဘောသကန်။ သားအိမ်။ အချောတို့ မောရ၀တီ ရွှေမြိုင်သူအလှလေးများနဲ့ စကားလက်ဆုံကြုံတဲ့နေ့တွေ ရက်တွေ တွက်ရေ မှန်းဆကာဘဲ ကိုယ်တို့တတွေ ပျော်နေ ၂။ မြို့လည်ခေါင် တောင်တန်းကြီးက တနည်းပ သာယာပေ [စေတီပုထိုးရဲ့ ...
... လှုပ်သောဘုရား - ကျော်မြတ်လင်း မြန်မာပြည်မြောက်ဖျားပိုင်းမှ ကောင်းမူးလုန်စေတီ - ရာမညကိုကိုနိုင် မူဆယ်မြို့ လွိုင်တိန်းခမ်း၌ တည်ထားကိုးကွယ်မည့် မိဂဒါမဟာစေတီတော်ကြီး - မြဆန်းကို(ကြေး/မြေ) ပင်းစက္ကလံပစေတီတော် ...
5. အလှပန်းတို့ ဝေစည် ရှမ်းအရှေ့ပြည် - တောင်တွင်းဘိုသိန်း
... ဒွေနာရစေတီတော်မြတ်ကြီး၏သမိုင်း ပါကန်-မိုင်းနှုန်းရှိ နှီးဘုရားသို့ ဘုရားဖူးခရီး ငြိမ်းချမ်းခြင်း၏ချိုမြိန်သော အရသာ ခံစားရတော့မည့် အရှေ့ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ် ကျိုင်းတုံဟိုတယ်သစ်သို့ လေ့လာရေးမြင်ကွင်း ...
6. သမိုင်းဝင် ငလျင်ကြီးများ နှင့် ကျော်ဇော ထင်ရှားသည့် မော်ဓောရှင်ဘုရား - မောင်မောင်စောဦး
eBook file size: 405 KB ebook pages:9Publication: ၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ၊ အတွဲ(၃) အမှတ်(၃)ထုတ် ဖြူနီညိုပြာမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ Download -Related Articles- စေတီတော်များနှင့်ပတ်သက်၍ ...
7. ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး နမျ့ခမျးမွို့ မွို့လယျမဟာမုနိ ဘုရားကွီးသမိုငျး
eBook file size: 14.4 MB ebook pages: 17 Publication: ၂ဝ၁ဝ ခုနှဈ။ (ဤစာအုပျကို ကိုဆနျးလှငျဦးမှ အီးမေးလျဖွငျ့ ပေးပို့ထားပါသညျ။) Download Related Articles စေတီတော်များနှင့်ပတ်သက်၍ ...
8. မူဆယ်မြို့ လွိုင်တိန်းခမ်း၌ တည်ထားကိုးကွယ်မည့် မိဂဒါမဟာစေတီတော်ကြီး - မြဆန်းကို(ကြေး/မြေ)
eBook file size: 262 KB ebook pages:7Publication: (ဤဆောင်းပါးကို ကိုဆန်းလွင်ဦးမှ ပေးပို့ပါသည်။) Download -Related Articles- စေတီတော်များနှင့်ပတ်သက်၍ ...
9. ပငျးစက်ကလံပစတေီတျော - ရနေံမွစေနျးတငျ့
eBook file size: 87.7 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၈၇ ခုနှဈ၊ ဇှနျလ၊ အမှတျ ၄၉၈ ထုတျ သှေးသောကျမဂ်ဂဇငျးတှငျ ပါသော ဆောငျးပါး ဖွဈပါသညျ။ Download -Related Articles- စေတီနှင့်ဆက်စပ်သော ...
10. သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏စာနယ်ဇင်းအယ်ဒီတာ ဘ၀ - မြင့်ဆွေ
eBook file size: 997 KB ebook pages:7Publication: ၁၉၇၆-ခုနှစ်၊ အမှတ်(၃၆၁)၊ ဇန်န၀ါရီလထုတ် သွေးသောက်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ Download -Related Articles- မြင့်ဆွေ၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ဓမ္မစေတီ ...
11. သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ဘ၀ဖြစ်စဉ် နေ့စွဲများ - စိုးရှိန်
eBook file size: 152 KB ebook pages: 11 Publication: ၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ Download -Related Articles- ဓမ္မစေတီ - မစ္စတာမောင်မှိုင်း အမျိုးသားကောလိပ် နှင့် ...
12. တံတားဦးတည် မင်္ဂလာစေတီမော်ကွန်း - တိုးတက်ရေးဦးသန်းဖေ
eBook file size: 43.1 KB ebook pages: 10 Publication: ၁၉၈၈-ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလထုတ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ Download
13. သဲပုံစေတီပွဲ - ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)
14. အမျိုးသားကောလိပ် နှင့် ပရိုဖက်ဆာဆရာလွန်း - ရင်ရင်ဌေး
eBook file size: 118 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၈၆-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် ရတနာမွန်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဓမ္မစေတီ - မစ္စတာမောင်မှိုင်း (သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း=ဆရာလွန်း) ...
15. ရွှေတိဂုံစေတီတော် - ဒါရိုက်တာဆရာမြင့်
eBook file size: 92.3 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၆၉-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ်၊ သွေးသောက်မဂ္ဂဇင်း၌ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဒါရိုက်တာဆရာမြင့်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ
16. ꨀွင်းမူးမိူင်းသေ မိုင်းသေစေတီတော်သမိုင်း
17. ꨀွင်းမူးမိူင်းသေ မိုင်းဆယ်စေတီတော်သမိုင်း
18. ဓမ္မစေတီ - မစ္စတာမောင်မှိုင်း
eBook file size: 1.09 MB ebook pages: 158 Publication: ဒုတိယအကြိမ်၊ မတ်လ၊ ၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ ရွှေပြည်စိုးပုံနှိပ်တိုက်၊ ၃၄ လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ download
19. မန့်ခမ်းစေတီတော် သမိုင်း(နမ့်ခမ်းမြို့)
eBook file size: 151 KB ebook pages: 10 ပုံနှိပ်ခြင်း - ၁၉၈၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်။ download
20. သီပေါမြို့ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးနှင့်ဝိဇယမာန်အောင် ကြေးစေတီတော် သမိုင်းစာတမ်း
eBook file size: 1.40 MB ebook pages: 22 Publication: 2004 download